C/laahi Yuusuf ayaa maanta soo gaadhay magaalada Baydhabo ee fadhiga Baarlamaanka Somaliya | maakhir.com
C/laahi Yuusuf ayaa maanta soo gaadhay magaalada Baydhabo ee fadhiga Baarlamaanka Somaliya
Baydhabo:- Madaxwayanah Dawlada Somaliya C/laahi Yuusuf Axmed ayaa maanta galinkii danbe ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ee Baarlamaanka Somaliya fadhiga u ah, Madaxwaynaha ayaa waxa aad halkaasi ugu soo dhaweeyay Boqolaal dad ah kuwaasi, oo caleema qoyan iyo sii diiran uga hortegay C/laahi Yuusuf, dhanka Xukuumada Somaliya ayaa iyana waxa halkaasi joogay Nuur Cadde.
C/laahi Yuusuf oo maalmihii ugu danbeeyay ku sugnaa magaalada Nairobi isaga oo horey uga yimid magaalada London ee caasimada wadanka Britian halkaasi oo ku joogay baaritaano dhanka caafimaadka, madaxwaynaha ayaa waxa la sheegay intii uu joogay magaalada Nairobi ee xarunta Kenya inuu wada tashiyo la yeeshay Masuuliyiinta Dalkaasi.
Socdaalka C/laahi Yuusuf ayaa waxa uu salka ku hayaa magcaabista golaha wasiirada ee Xukuumada Cusub iyada oo mudooyinka la sugayay Madaxwayne Yuusuf si uu madasha lagu magcaabayo Xukuumadaasi cusub u joogo.
Magcaabista Xukuumada cusub ayaa dhamaan waxa indhaha ku haya Beesha Caalamka iyo waliba Bulsha waynta Somaliyeed iyada oo ay dadku aad u hadal hayaan Xukuumadaasi cusub ee dhawaan laga sugayo inuu soo dhiso Raisalwasaare Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde).
Warar si hoose warbaahinta u soo gaadhay ayaa waxay xaqiijinayaan in markiiba uu C/laahi Yuusuf kulan albaabadu u xidhan yihiin uu la yeeshay Raisalwasaare Nuur Cadde iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya Shiikh Adan Madoobe, kulankaasi ay yeesheen sadexada Masuul ee ugu sareeya Dawlada Somaliya ayaa waxa lagu macanaynkaraa inuu salka si toosa ugu hayo Magcaabista Dawlada Cusub.
« Is bedel siyaasadeed oo soo food saaray Dalka Kenya
Qarax xoogan ayaa caawa Gil Gilay gudaha Magaalada Bosaaso »